Momba anay - Baoding Xueruisha Feather And Down Products Co., Ltd.
Izahay dia hita ao amin'ny iray amin'ireo faritra volom-borona midadasika indrindra sy midina any Shina - farihin'i Baiyang, Baoding, Hebei any Shina avaratra. Xueruisha Feather And Down Products Co., Ltd. dia manana traikefa lehibe amin'ny famokarana vokatra volom-borona sy midina, ao anatin'izany ny lamba firakotra, ondana, farafara ary kidoro ambany, kitapo fatoriana, fitafiana ary ny hafa. Ny orinasanay dia manana andiana làlan'ny vokatra amin'ny eiderdown sy output izay valo hetsy taonina isan-taona. Ny vokatray dia afaka manatratra ny Fitsipika Sinoa amin'ny fanondranana. Noho ny volavola tsy manam-paharoa sy ny kalitao avo lenta, dia lafo amidy any Amerika, Eropa, Japon ary Korea ny vokatray. Ny fahaizantsika mamokatra mahatratra enina tapitrisa tapitrisa isan-taona. Ny vokatray dia tena atolotray eo amin'ny tsena eo an-toerana ary nahazo ny loka tamin'ny Product First-Rate Product, National First-Rate Product, A Loyalalty Product nataon'ny mpanjifa sy ny marika malaza any Hebei Province miaraka amin'ny kalitao. Nahazo mari-pankasitrahana ISO9001 tamin'ny taona 2009. Ny "fahamendrehana, ny fanoloran-tena ary ny fanavaozana" dia fanahinay tao anatin'ny 11 taona lasa. "Ny kalitao tsara, ny fitantanana tsara ary ny serivisy ho an'ny mpanjifa" no foto-kevitry ny serivisinay.
Nanomboka ny 1992
Tamin'ny 1973, ny mpanorina sy filoham-pirenentsika, Jianhong Liu dia teraka tao amin'ny fianankaviana mpanjono iray tao amin'ny Village Dazhangzhuang, Anxin County, Provinsi Hebei. Liu dia nankany amin'ny ozinina midina any amin'ny faritr'i Anxin mba hiasa amin'ny asan'ny mpiasa volon'ondry. Asa mafy sy mandreraka ny fikolokoloana volo. Tsy nilavo lefona i Liu ary tsy nilalao malama. Nifoha maraina izy ary niarahaba ny maizina ary niasa mafy. Nahazo haingana ny fankasitrahana sy fitokian'ny mpitantana ny orinasa izy. , Nentina ho mpitan-kaonty izy tao anatin'ny antsasak'adiny latsaka.
Tamin'ny 1992, niaraka tamin'ny vola 20.000 Yuan novonjeny tamin'ny asa an-tselika sy ny nofinofy hananganana orinasa dia niara-niasa tamin'ny namany handeha atsimon'ny Tanànan'i Guigang, Guangxi izy ary nanomboka varotra varotra sy fivarotana sarimihetsika. Taorian'ny asa mafy nandritra ny telo taona, tamin'ny 1995, Liu 22 taona dia nanana renivohitra an-tapitrisany, ary izy no tompon'ny faralahy Dazhangzhuang Village avy amin'ny fianakaviana mahantra. Niantehitra tamin'ny asa mafy sy fahazotoana handavaka ilay "vilany volamena voalohany" izy.
Tamin'ny 1999, Liu dia nisoratra anarana ny Jinlida Down Products Factory, nanoratra ny marika ary niditra tamin'ny fomba ofisialy ny sehatry ny famokarana vokatra. Nidina an-tsena nandritra ny volana maromaro izy, nandinika tsara ny tsena, ary namolavola drafitra famokarana vokatra sy marketing. Mikasika ny filozofia momba ny orinasa dia nanizingizina hatrany izahay ny "handresy ny mpanjifa tsy mivadika ary hampivelatra ny tsena amin'ny fahendrena". Rehefa mivoatra ny orinasa dia tsy mitsahatra mieritreritra an'izany izy: Raha te ho lehibe dia tsy maintsy mijery ny tsena sy izao tontolo izao ny orinasa.
Ny sombinà volom-borona kely dia tsy misy atiny teknika ambany. Liu dia nitarika ny orinasa hanizingizina ny hamokatra amin'ny fomba henjana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Vantany vao nivoaka ireo vokatra nidina dia noraisin'ireo mpanjifa izy ireo ary nahazo ny "National National Product", "Hebei Famous Brand", "Hebei Famous Brand", "Consumer", "Ireo izay afaka matoky ny vokatra", " fifanarahana sy vondrona azo itokisana "ary loka hafa.
Tamin'ny 2003, Liu dia nanova tamin'ny fomba ofisialy ny anaran'ny Jinlida Down Products Factory ho Anxin County Liteshu Down Products Co., Ltd., ary nanitatra ireo karazan-vokatra ambanin'ny marika "Liteshu", avy amin'ny duvet tokana tany am-boalohany ho any anaty kitapo fatoriana, vokatra maro toy ny palitao nidina sy ny ondana. Tamin'ny 2005, "Liteshu" dia nandalo ny fanamarinana ny rafitra fitantanana kalitao iraisam-pirenena ISO9001: 2000. Nahazo fitokisana tamina kalitao i "Liteshu", nahazo baiko marobe ary nanomboka niditra tamin'ny tsena iraisam-pirenena. Nahatratra 100 000 mahery ny varotra vokarin'ny orinasa tamin'io taona io, ary nihoatra ny 50 tapitrisa Yuan ny sandan'ny vokatra.
Tamin'ny taona 2006, ny orinasa "Liteshu" sy France Saint Laurent • Xueruisha (International) Garment Co., Ltd. dia nikambana tamin'ny fisoratana anarana sy ny fananganana Baoding Xueruisha Down Products Co., Ltd., ary nandefa ny andiam-pamokarana marika "Xueruisha".
Tamin'ny 27 Mey 2014, Xueruisha Down Products Co., Ltd. dia voatanisa tamim-pahombiazana ho orinasa voalohany tao Baoding tonga tany amin'ny birao lehibe ao Shijiazhuang City. Tao anatin'izay 20 taona lasa izay, Xueruisha Down Products Co., Ltd. dia nividy, nanodina ary nivarotra volom-borona efa ho 50 000 taonina; namokatra sy nivarotra vokatra 2,2 tapitrisa nidina. Ireo rehetra ireo dia mahatonga an'i Liu hanana fahatokisana tanteraka amin'ny fampandrosoana ho avy ny orinasa.
Tamin'ny 1 aprily 2017, tonga ny vaovao fananganana ny Distrikan'i Xiong'an Vaovao. Amin'ny maha mpandraharaha tantsaha izay niasa mafy hatrany ambany, Liu Jianhong dia tena faly tamin'ny fahafaha-mampandroso any amin'ny tanàna nahaterahany, ary mandritra izany fotoana izany dia nieritreritra lalina ny amin'ny fandraisana anjara amin'ny fananganana ny distrika vaovao izy.
Amin'ny maha filohan'ny Chamber of Commerce Hebei Down Industry azy dia nilaza i Liu fa hanohana tanteraka ny fananganana ny distrika vaovao izy ary handray andraikitra amin'ny fanarahana ny fanapahan-kevitry ny distrika vaovao. Mandritra izany fotoana izany, mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny distrika vaovao, miampy ny toetran'ny distrika vaovao, dia hiezaka izahay hiomana amin'ny fanovana sy fanavaozana ny orinasa.
Tamin'ny 25 Oktobra 2020, ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana leapfrog vaovao ao amin'ny Distrikan'i Xiong'an New, ny Fikambanan'ny Indostria E-commerce Anxin County Cross-border dia mifanaraka amin'ny fampandrosoana ny fotoana sy ny filan'ny toe-javatra, eo ambanin'ny fitarihana marina ny biraon'ny fanavaozana ny distrika sy ny fampandrosoana, ary ny mpandraharaha rehetra Miaraka amin'ny fikarohanay sy ny fanohananay, ary amin'ny alàlan'ny ezaky ny mpikambana rehetra, dia notanterahina tao amin'ny efitrano multifunctional of Xueruisha ny fivoriana fanokafana tamin'ny 25 Oktobra. fanavaozana sy fanovana ireo indostria nentim-paharazana ao amin'ny Distrikan'i Xiongan Vaovao.
Liu, filohan'ny Xueruisha Co., Ltd., dia voafidy ho filoha. Nilaza ny filoha Liu fa ny fananganana ny fikambanana dia tena mahasoa amin'ny fampandrosoana ny e-varotra Anxin sy Xiong'an miampita sisintany. Amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny indostria dia hizara ny fananany manokana, ny fotoana ary ny traikefany amin'ny fanovana orinasa izy, ary handray soa miaraka amin'ireo orinasa mpikambana, ary hanangana sehatra serivisy avo lenta.
Andraikitry ny fiaraha-monina
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nanolotra Yuan maherin'ny 2 tapitrisa ho an'ny fiarahamonina ilay orinasa ary nanolotra palitao nidina maherin'ny 10.000. Nomena ny lohateny hoe "Advanced Individual" ny Governemanta Hebei Provincial People ho an'ny fanomezana ho an'ny fanabeazana sy ny "Charity Enterprise" avy amin'ny federasiona fiantrana ao amin'ny Anxin County.
Hitohy ny tantarantsika…